50,000 tan khadka bacriminta bacriminta - YiZheng Mashiinnada Culus Co., Ltd.
Si loo horumariyo beeraha cagaaran, waa inaan marka hore xallino dhibaatada wasakheynta ciidda. Dhibaatooyinka caamka ah ee ka jira carrada ayaa ah: isku soo ururinta carrada, isu dheelitir la'aanta saamiga nafaqada macdanta, maaddada dabiiciga ah ee yar, qodista gacmeed, aashitada ciidda, cusbaynta ciidda, wasakhda ciidda, iwm. carrada waxay u baahan tahay in la hagaajiyo. Hagaaji maadada dabiiciga ee carrada, si markaa ay u jiraan wasakhdo badan iyo waxyaabo yar oo waxyeello u leh ciidda.
Waxaan bixinaa qaabeynta iyo soo saarista qaab dhammaystiran oo ah khadadka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah. Bacriminta dabiiciga ah waxaa laga sameyn karaa haraaga methane, qashinka beeraha, xoolaha iyo digada digaaga iyo qashinka degmada. Qashinkan dabiiciga ah wuxuu ubaahanyahay in lasiihafeeyo kahor intaan loobadalin bacriminta ganacsiga dabiiciga ah ee qiimaha ganacsiga iibka ah. Maalgashiga qashinka loogu beddelayo hanti gabi ahaanba waa u qalantaa.
Khadka wax soo saarka ee bacriminta cusub ee dabiiciga ah ee soosaarka sanadlaha ah ee 50,000 tan ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa soo saarista bacriminta dabiiciga ah ee leh qashinka beeraha, xoolaha iyo digada digaaga, dhoobada iyo qashinka magaalooyinka sida alaabta ceeriin ee dabiiciga ah. Khadadka wax soo saarka oo dhan uma rogi karaan oo keliya qashinka dabiiciga ah ee kala duwan bacriminta dabiiciga ah, laakiin sidoo kale waxay keeni karaan faa'iidooyin badan oo deegaan iyo dhaqaale.
Qalabka khadka bacriminta dabiiciga ah inta badan waxaa ka mid ah heesaha iyo quudiyaha, granulator durbaanka, qalajiyaha, mashiinka shaandheeya shaandhada, baaldi baaldiye, gawaadhida suunka, mashiinka baakadaha iyo qalabka kale ee kaabayaasha ah.
Qalabka ceyriinka loo isticmaalo
Khadka cusub ee soo saarista bacriminta waxaa lagu dabaqi karaa waxyaabo kala duwan oo dabiici ah, gaar ahaan caws, haraaga khamriga, haraaga bakteeriyada, saliida haraaga, xoolaha iyo digada digaaga iyo waxyaabo kale oo aan sahlaneyn in la galiyo. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa daaweynta acid humic iyo wasakhda wasakhda.
Waxyaabaha soo socdaa waa kala soocidda alaabta ceeriin ee khadadka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah:
1. Qashinka beeraha: Caws, haraaga digirta, suufka, rootiga bariiska, iwm.
2. Digada xoolaha: isku dar ah digada digaaga iyo digada xoolaha, sida kawaanada xoolaha, qashinka suuqyada kaluunka, lo'da, doofaarrada, idaha, digaaga, shinbiraha, goose, kaadida ariga iyo saxarada.
3. Qashinka warshadaha: haraaga khamriga, hadhaaga khalka, haraaga kasaafada, haraaga sonkorta, haraaga furfural, iwm.
4. Qashinka guriga: qashinka cuntada, xididdada iyo caleenta khudradda iwm.
5. Dhoobo: dhoobada wabiyada, bulaacadaha, iwm.
Khadka wax soo saarka ee bacriminta dabiiciga ah wuxuu ka kooban yahay qashin qub, wax isku qasan, wax burburiya, mashiinka wax lagu rido, qalajiyaha, qaboojiye, mashiinka wax lagu rido, iwm.
Khadka cusub ee soosaarida bacriminta dabiiciga ah wuxuu leeyahay astaamaha waxqabadka xasilloon, waxtarka sare, dayactirka habboon iyo nolosha muddada dheer.
1. Kala duwanaantaani kuma haboona kaliya bacriminta dabiiciga ah, laakiin sidoo kale bacriminta dabiiciga ah ee lagu daro bakteeriyada shaqeysa.
2. Dhexroorka bacriminta ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Dhammaan noocyada kala duwan ee granulators bacriminta ee lagu soo saaray warshadeenna waxaa ka mid ah: granulators-ka cusub ee bacriminta, granulators disk, granulators caaryada fidsan, granulators durbaanka, iwm. Dooro granulators kala duwan si ay u soo saaraan walxo qaabab kala duwan leh.
3. Si ballaaran ayaa loo isticmaalay. Waxay daaweyn kartaa alaabta ceyriinka ah ee kala duwan, sida qashinka xoolaha, qashinka beeraha, qashinka halsano, iwm. Dhamaan waxyaabahan ceyriinka ah waxaa lagu farsameyn karaa qaybo ka mid ah bacriminta ganacsiga ee granular granular.
4. otomaatiga sare iyo saxsanaanta sare. Nidaamka maaddooyinka iyo mashiinka wax lagu duubo waxaa xukuma kumbuyuutaro oo otomaatig ah.
5. Tayo sare, waxqabad xasiloon, hawlgal haboon, shahaadada otomaatiga sare iyo nolol adeeg dheer. Waxaan tixgelin buuxda ka qaadaneynaa waayo-aragnimada isticmaaleha marka aan sameyneyno iyo soo saarista mashiinnada bacriminta.
Adeegyada qiimaha leh:
1. Warshadeenu waxay gacan ka geysan kartaa bixinta qorsheynta aasaasiga dhabta ah ka dib marka la xaqiijiyo amarada qalabka macaamiisha.
2. Shirkaddu waxay si adag ugu hoggaansan tahay heerarka farsamo ee la xiriira.
3. Tijaabi si waafaqsan xeerarka ku habboon ee tijaabada qalabka.
4. Kormeer adag kahor intaan badeecadu ka bixin warshada.
Xayawaanka dib loo rogay iyo saxarada digaaga iyo alaabada kale ee ceyriinka ah ayaa si toos ah loo geliyaa aagga halsano. Halsano kadib iyo gabowga labaad iyo isugeynta, urta xoolaha iyo digada digaaga waa la baabi'iyaa. Bakteeriyada qallalan ayaa lagu dari karaa marxaladan si ay u kala daadato fiilooyinka aan dhab ahayn ee ku jira si markaa shuruudaha cabbirka walxaha burburka ay u buuxin karaan shuruudaha kala-soocidda ee soo-saarista kala-soocidda. Heerkulka alaabta ceyriinka waa in si adag loo xakameeyaa inta lagu jiro halsano si looga hortago heerkulka xad-dhaafka ah loona joojiyo waxqabadka noolaha iyo enzymes. Mashiinada rogroga ee socda iyo mashiinada birta ku dhajiya ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa rogista, isku darka iyo xawaareynta halsano ee xirmooyinka.
2. Burburinta Bacriminta
Nidaamka shiidan ee wax lagu shiidayo ee dhammaystiraya gabowga iyo geedi socodka is-dulsaarka ayaa macaamiisha u adeegsan karaan inay doortaan shiishadda walxaha semi-qoyan, oo la jaanqaadaya qoyaanka alaabta ceeriin ee ku jirta noocyo badan.
Ka dib markaad burburinayso alaabta ceyriinka ah, ku dar nafaqooyin kale ama maaddooyinka kaabayaasha ah sida ku cad qaaciidada, una isticmaal isku-darka jiifka ama toosan inta lagu gudajiro howsha walaaqista si aad u walaaqdo alaabta ceyriinka ah iyo wax lagu daro si siman.
Kala soocida ka hor, haddii qoyaanka alaabta ceyriin ay ka badato 25%, oo leh huur iyo cabbir walxaha qaarkood, biyuhu waa inay ka yaraadaan 25% haddii qalajiyaha durbaanka loo isticmaalo qalajinta.
Mashiinka granule bacriminta cusub ee dabiiciga ah ayaa loo isticmaalaa in lagu soo ururiyo alaabta ceyriinka ah ee kubadaha si loo ilaaliyo waxqabadka microbial. Heerka badbaadada ee noolaha isticmaalaya granulator-kan ayaa ka badan 90%.
Waxyaabaha qoyaanka ee walxaha granulation-ku waa qiyaastii 15% ilaa 20%, taasoo guud ahaan ka badan bartilmaameedka. Waxay u baahan tahay mashiinno qalajinta si loo fududeeyo gaadiidka iyo keydinta bacriminta.
Shayga la qalajiyey wuxuu ka galayaa qaboojiyaha gudbiyaha suunka. Qaboojiyaha wuxuu qaataa badeecada kuleylka qaboojiyaha ee qaboojiyaha ah si uu si buuxda uga baabi'iyo kuleylka hadhaaga ah, isagoo sii yareynaya waxyaabaha biyaha ka kooban.
Waxaan bixinaa mashiinka mashiinka durbaanada tayo sare leh oo tayo sare leh si loo gaaro kala soocida walxaha dib loo rogay iyo alaabooyinka la dhammeeyay. Waxyaabaha dib loo warshadeeyay ayaa dib loogu soo celiyey jajabka si loo sii farsameeyo, isla markaana sheyga dhammeeyey loo geeyo mashiinka daahan bacriminta ama si toos ah mashiinka baakadaha ee otomaatiga ah.
Shayga la dhammeeyey wuxuu galaa mashiinka baakadaha iyada oo loo sii marinaayo suunka xambaaraha. Samee baakado tiro iyo otomaatig ah oo ah alaabooyin dhammaaday. Mashiinka wax lagu baakadeeyo wuxuu leeyahay tiro ballaaran oo sax ah iyo saxnaan sare. Waxaa lagu daraa mashiinka tolidda wax lagu qaado oo leh miis kor loo qaadi karo. Mid ka mid ah mashiinada waa wejiyo badan oo hufan. La kulan shuruudaha baakadka iyo u isticmaal jawiga alaabooyin kala duwan.